तल सूचीबद्धले शीर्ष दक्षिण अफिक्रान अनलाइन क्यासिनो जुवा साइटहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यी जुवा ब्रान्डहरू सबै राम्ररी स्थापित छन् र विज्ञहरूको टोलीले पूर्ण परीक्षण र परीक्षण गरेका छन्। तल चित्रित प्रत्येक साइटले SA खिलाडीहरूलाई सुविधाजनक बैंकि options विकल्पहरूको प्रयोग गरेर रान्ड (ZAR) मा जम्मा गर्ने र फिर्ता लिने क्षमता प्रदान गर्दछ। यी उद्योगहरूमा दक्षिण अफ्रिकी अनलाइन जुवा साइटहरूको नेतृत्वमा र्यान्ड बोनस दावी गर्नुहोस् र आज खेल्न सुरू गर्नुहोस्।
अफ्रिका महादेशमा सबैभन्दा लोकप्रिय देशहरूको रूपमा, दक्षिण अफ्रिका सुन्दर परिदृश्य, रोमाञ्चक पर्यटन स्थलहरू, र एक मुट्ठी भर भूमि आधारित क्यासिनोहरूको घर छ।
दुर्भाग्यवश, २०१० सम्म दक्षिण अफ्रिकामा अनलाइन जुवा अवैध छ किनभने नयाँ कानूनहरू लागू भएपछि यसले स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै जुवा अन्त्य गर्दछ।
ठाउँमा कानूनले परिणामस्वरूप कोहीले अनलाइन जुवामा हात हाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् १०० R10 लाई जरिवाना वा १० बर्षको जेल सजाय - वा दुबै! कमसेकम कम्तिमा पनि, खेलाडीहरूले उनीहरूको जित जित्न सक्दछन् र गैरकानूनी विजयी ट्रस्टमा थप्न सक्दछन्।
शीर्ष १० दक्षिण अफ्रिकी अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० दक्षिण अफ्रिकी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
२०२० मा खेल्नको लागि उत्तम दक्षिण अफ्रिकी अनलाइन क्यासिनो पत्ता लगाउन गाह्रो हुनुपर्दैन। हाम्रो शीर्ष १० सूचिहरूले मोबाइल र डेस्कटप प्लेयरहरूको लागि सबै उत्तम दक्षिण अफ्रिकी क्यासिनो साइटहरू प्रकट गर्दछ। हामीले सबै कडा मेहनत गरेका छौं ताकि तपाईलाई सबै जुवा साइटहरूको गहन समीक्षा र रेटिंग कम्पाइल गर्नु पर्दैन। यसलाई हाम्रो सिफारिश सूचीमा बनाउनको लागि, यी वेबसाइटहरूले कठोर परीक्षणहरू पास गर्न आवश्यक छ। हामी केवल दक्षिण अफ्रीकाका लागि अनलाइन क्यासिनोहरू सूचीबद्ध गर्दछौं जुन इजाजतपत्र र विनियमित छन् र प्लेयरहरूलाई ठूलो मनोरन्जन मूल्य प्रदान गर्दछ। हाम्रो वेबसाइटको यस पृष्ठमा, तपाईं दक्षिण अफ्रिकामा वास्तविक पैसा गेमिंगको लागि आवश्यक सबै जानकारीहरू भेट्टाउनुहुनेछ।
हाम्रो टीमले दक्षिण अफ्रिकीहरूका लागि शीर्ष अनलाइन क्यासिनोहरूको लागि टाढा टाढा खोजी जारी राख्नेछ। त्यसपश्चात हामी हाम्रो साइटमा उनीहरूको समीक्षा गर्नेछौं कि प्रत्येक साइटलाई इजाजतपत्र दिइएको छ र यो नियमित छ, गुणस्तरीय खेलहरू प्रदान गर्दछ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तत्काल विजेता हुने मौकाको लागि दक्षिण अफ्रिकी खेलाडीहरूको लागि खुला छ। हामी शीर्ष ब्रान्डहरू सिफारिस गर्न दक्षिण अफ्रिकामा जुवा नियमहरूसँग पनि अप-टु-डेट रहनेछौं।
सबैभन्दा खराब र सर्वश्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिकी अनलाईन क्यासिनोहरू छुट्टाउँदै
यस वेबसाइटमा हामीले यहाँ तपाईंलाई समीक्षा र सिफारिस गरेका सबै दक्षिण अफ्रिकी अनलाइन क्यासिनोहरू प्रमाणित ट्र्याक रेकर्डहरूसहित विश्वसनीय अपरेटरहरूद्वारा नियन्त्रण गरिन्छ र उनीहरूले अनलाइन जुवा इजाजत पत्रहरू प्राप्त गर्छन् जसलाई प्रख्यात इजाजतपत्र अधिकृतहरू द्वारा वास्तविक नगद जुवा सेवाहरू प्रदान गर्न सकिन्छ। धेरै प्रमुख इजाजत पत्र क्षेत्रहरू मध्ये एकमा आधारित विश्व भरि। अर्को शब्दमा, हाम्रो चित्रित क्यासिनोहरूले इजाजतपत्र जारी गर्नु अघि कठोर परीक्षण र कडा जाँच प्रक्रिया पार गरे। माथि उल्लेख गरिएको दुष्ट क्यासिनोको बारेमा पनि त्यस्तै भन्न सकिदैन।
यी व्यक्तिहरू कि त उनीहरू लाइसेन्स पाएका छन् बारेमा झूट छन्, तिनीहरू बेईमान र अविश्वसनीय अधिकार द्वारा इजाजतपत्र छन्, वा तिनीहरूसँग जेसुकै पनि लाइसेन्स छैन। एक खेलाडीको रूपमा, तपाईं एक मुद्दा उठ्न सक्छ मा उभिन एक खुट्टा संग छैन (जस्तै क्यासिनो तपाईं आफ्नो जीत भुक्तानी गरिरहेको छैन) एक बिना इजाजत अनलाईन क्यासिनो मा।
यदि मुद्दा कुनै पनि पूर्ण रूपमा इजाजत दिइएको, अत्यधिक सिफारिश गरिएको दक्षिण अफ्रिकी अनलाइन क्यासिनोमा देखा पर्दछ भने तपाईंले पाउनुहुनेछ कि। 99.99% जब खेलाडी समर्थनले तपाईंको समस्यालाई कुनै पनि समयमा समाधान गर्न सक्षम हुनेछ। यदि हाम्रो कुनै पनि शीर्ष-रेटेड अनलाइन क्यासिनोमा मैत्रीपूर्ण र पेशेवर प्रशिक्षित खेलाडी समर्थन एजेन्टहरूले कुनै पनि कारणको लागि तपाईंको मुद्दाको समाधान गर्न सक्दैन भने तपाईं सजिलैसँग अनुमति पत्रमा गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ जुन अनुमतिपत्रको साथ इजाजत पत्रको साथ क्यासिनो जारी गर्दछ। जे होस्, यो कहिले कही धेरै दुर्लभ मामिलाहरूमा हुन्छ जुन तपाईंले अब सम्म कुनै गुनासो लिनु पर्छ।
यदि हाम्रो एक चित्रित SA अनलाईन क्यासिनोले तपाईंलाई बोनस प्रदान गर्दैछ भने तपाईं जहिले पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ कुनै पनि गोप्य नियम र सर्तहरू छैनन् कि तपाईंले चिन्ता गर्नुपर्ने छ। यी क्यासिनोहरूले विज्ञापन गर्ने क्यासिनो बोनसहरूमा ठाडो ब्याजिंग आवश्यकताहरू हुनेछैन (तपाईंले आफ्नो बोनसबाट बनाएको कुनै पनि जीत फिर्ता लिन सक्नु अघि तपाईले बाजी दिन आवश्यक पर्ने नगद राशि)। नक्कली क्यासिनोसँग एकदम ठाडो ब्याजेरिंग आवश्यकताहरू हुन्छन् वा उनीहरू आफ्नो मूल बोनस प्रस्तावको साथ राम्रो आउँदैनन्।
हाम्रो सबै क्यासिनो भरपर्दो अनलाईन क्यासिनो सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् जुन प्रख्यात तेस्रो पक्ष अनलाइन क्यासिनो टेस्ट एजेन्सीहरू द्वारा नियमित आधारमा परीक्षण गरिन्छ र दुवै भुक्तानहरू र दिन प्रति दिन कार्यहरू प्रतिष्ठित तेस्रो पार्टी अधिकारीहरू द्वारा अनुगमित गरिन्छ जुन यो सुनिश्चित गर्न निरन्तर काम गरिरहेका छन्। तपाईं, खेलाडी, संरक्षित रहन्छ।
निकासीको समय प्रक्रिया गर्नको लागि days दिन भन्दा बढि लिन सक्दछ (जबसम्म तपाईं चेक वा मनी कूरियरबाट फिर्ता लिनुहुन्न) र प्रायः जसो केसहरूमा तपाईंले आफ्नो हात जित्नुपर्नेछ अधिकतम days 48 दिन भित्र। तपाईंको जीतलाई लिनको लागि ठ्याक्कै समय यो तपाईंले प्रयोग गर्ने फिर्ताको विधिमा निर्भर गर्दछ र समय र दिनमा तपाईंले फिर्ता लिन खोज्नु भएकोमा पनि निर्भर गर्दछ।
उदाहरणको लागि यदि तपाईले शुक्रबार बिजयको पछि फिर्ता लिन खोज्नु भयो भने व्यापारको नजिक पछि (जस्तै pm बेलुका)) तपाईले सोमबार बिहान5बजे फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्नु भन्दा बढि स्वाभाविक रुपमा केहि समय लाग्छ। यो विश्व मा हरेक अनलाइन क्यासिनो मा धेरै मानक छ। केवल नक्कली क्यासिनोको सफा गर्नुहोस् र कुनै एक निराशाबाट बच्न एक वा हाम्रो सिफारिस गरिएको क्यासिनो खेलिरहनुहोस्।
हाम्रो १० चरण मूल्यांकन
१ पृष्ठभूमि र सुरक्षा जाँच ✓
हामी अनलाइन क्यासिनोको नट्स र बोल्टमा जान अघि पनि हामी जारी राख्नु पर्छ कि भनेर हेर्न हामी पृष्ठभूमि जाँच गर्छौं। साइटको अनलाइन क्यासिनो उद्योगमा राम्रो नाम छ कि छैन भनेर हामी जाँच गर्छौं।
हामी प्रश्नहरू सोध्छौं 'साइट पछाडि को छ?' 'साइट कहाँ दर्ता गरिएको छ?' यदि साइटको बारेमा केहि पनि देखिन्छ भने, यदि यसले रातो झण्डा खडा गर्छ वा हामी छायादार सुविधाहरूमा उठाउँछौं, यो हामीबाट 'धन्यवाद तर धन्यवाद' होइन। हामी यो जाँच गर्छौं कि यो इजाजत पत्र प्राप्त छ वा छैन (यदि होईन भने, यो स्थानमा निक्सा हुन्छ)।
२ सुरक्षित र सुरक्षित सफ्टवेयर ✓
हामी सुनिश्चित गर्छौं कि अनलाइन क्यासिनो सफ्टवेयर पानी तंग छ। यसको मतलब क्यासिनोले तपाईंको निजी र वित्तीय विवरणहरू निजी राख्न अनलाइन सुरक्षामा अन्तिम शब्द प्रयोग गर्दछ। सफ्टवेयर पूर्ण SSL मार्फत ईन्क्रिप्ट हुनुपर्दछ।
हामी सुनिश्चित गर्छौं कि सफ्टवेयर प्रदायकको ईन्डस्ट्रीमा राम्रो नाम छ। ठूला नामहरूले छायाँको अनलाइन क्यासिनोको साथ पign्क्तिबद्ध गरेर तिनीहरूको प्रतिष्ठालाई कहिलै बिगार्दैन। हामी प्रत्येक सफ्टवेयर प्रदायक जाँच गर्नेछौं कि उनीहरूका खेलहरू निष्पक्ष छन् र उनीहरूको RNG पारदर्शी छ। हामी केवल अनलाइन क्यासिनोहरू मूल्याate्कन गर्दछौं जुन सबै भन्दा राम्रो सफ्टवेयर समूहहरू द्वारा संचालित हुन्छन्।
Rand बै Rand्कि Rand रान्डमा (ZAR) ✓
हामी एक उत्कृष्ट अनलाइन क्यासिनो फेला पार्न सक्छौं तर यदि यसले दक्षिण अफ्रिकी खेलाडीहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन भने हामी यसलाई मूल्या won't्कन गर्दैनौं। हामी केवल तब जारी राख्नेछौं यदि अनलाइन क्यासिनोले ZAR मा निक्षेप र निकासी अनुमति दिन्छ।
हामी चाहन्छौं कि तपाईं अनावश्यक खर्चहरू जस्ता मुद्रा रूपान्तरणको लागत बेवास्ता गर्न को लागी। यदि अनलाइन क्यासिनोले तपाईंलाई रान्ड्समा खेल्न र भुक्तानी गर्न अनुमति दिदैन भने, त्यहाँ अन्य धेरै उत्कृष्ट व्यक्तिहरू छन्।
Dev उपकरण समर्थन ✓
अधिक र अधिक खेलाडीहरू उनीहरूको अनलाइन क्यासिनो मनोरन्जनलाई मोबाइल उपकरणहरूमा सारिरहेका छन्। हामी तपाईलाई एक महान अनलाइन क्यासिनो फेला पार्न चाहँदैनौं, केवल यो पत्ता लगाउन कि तपाई यसलाई आफ्नो मोबाइल उपकरणमा खेल्न सक्नुहुन्न। हामीद्वारा सिफारिस गरिएका सबै क्यासिनोहरूले तपाईंलाई गोमा जुवा खेल्ने विकल्प दिन्छन्।
त्यहाँ अनुभव, कार्यक्षमता वा डेस्कटप वा अनलाइन क्यासिनोको मोबाइल संस्करण बीच सुविधाहरूमा बिल्कुल भिन्नता छैन।
Reg पंजीकरण र नेभिगेसन ✓
हामीले जाँच गरेको पहिलो चीजहरू मध्ये एक अनलाइन क्यासिनोमा खेलाडीको रूपमा दर्ता गर्न र साइट नेभिगेट गर्न कत्ति सजिलो हुन्छ। प्रक्रिया छिटो र सरल हुनुपर्दछ। तपाईं मिनेटमा दर्ता गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र डाउनलोड वा तत्काल प्ले विकल्पहरूमा कुनै गडबड बिना पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। समान शिरामा, तपाईले अनलाइन क्यासिनो वरपर तपाईको बाटो एकदम सजीलो पाउन सक्नुहुनेछ। तपाइँ खेलहरू, ग्राहक समर्थन, निक्षेप विधिहरू र कुनै समस्या बिना बोनस जस्ता मुख्य सुविधाहरू फेला पार्न सक्षम हुनुपर्दछ।
Funds निक्षेप कोष र सम्पर्क समर्थन ✓
हामी वास्तविक पैसा खातामा साइन अप गर्न र यसमा कोष जम्मा गर्न कत्ति सुविधाजनक हो जाँच गर्छौं। के बैंकिंग विधिहरू सुरक्षित र सुविधाजनक छन्? के त्यहाँ भुक्तान विधिहरूको राम्रो दायरा समर्थित छ - डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट ई-वालेटहरू?
एउटा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड भनेको राम्रो ग्राहक समर्थन नेटवर्कको स्थानमा हुनु हो। के 24/7 समर्थन काम गर्दछ? के यो समात्न सजिलो छ? के यो एक विकल्प को रूप मा प्रत्यक्ष कुराकानी छ? के समर्थन टोली मैत्री र जानकार छ? के तपाईंको गुनासो वा अनुरोधहरू द्रुत रूपमा व्यवहार गरियो?
हामी यी सबै प्रश्नहरू, र अधिक सोध्छौं - र हामी राम्रो उत्तरहरू पाउने आशा गर्दछौं - जब हामी तपाईंको लागि सबै भन्दा राम्रो दक्षिण अफ्रिकी अनलाइन क्यासिनोको मूल्यांकन गर्दछौं।
Bon बोनस र नियमहरूको निष्पक्षता ✓
हामी बोनस र पुरस्कार को खोजी मा छन् कि उचित wagering आवश्यकताहरु संग आउँछ। यो बोनसको आकार भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। साइटले तपाईंलाई ठूलो बोनस दिने प्रतिज्ञा गर्न सक्छ तर यदि त्यहाँ लुकेका जालहरू छन् जुन तपाईंलाई कुनै पनि पुरस्कार देख्न असम्भव बनाउँदछ, यो एकदम अर्थहीन छ। हामी सबैलाई एक ठूलो बोनस मनपर्छ, तर तपाईं यो जान्न चाहनुहुन्छ कि यो तपाईंको पहुँच भित्र छ।
Games खेलहरूको चयन ब्राउज गर्नुहोस् ✓
हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि हाम्रो सूचीमा अनलाइन क्यासिनोहरूले त्यहाँ बाहिर धेरै उत्तम प्रदायकहरूबाट एक शानदार श्रेणीको प्रस्ताव गर्दछ। हामी यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं कि सबै खेलाडीहरूले मनोरञ्जनात्मक राख्न धेरै शीर्षकहरू फेला पार्नेछन्। हामी अनलाइन क्यासिनोहरू पनि प्रयोग र सिफारिस गर्दछौं जसले तपाईंलाई स्वतन्त्र अभ्यास मोडमा र वास्तविक पैसाको लागि खेल्न अनुमति दिन्छ।
Play खेल्दै र जीत क्यास आउट n
एक पटक तपाइँ तपाइँको जीतलाई फिर्ता लिन तयार हुनुहुन्छ, तपाइँ हप्ता सम्म हिँड्ने चाहनुहुन्न जबसम्म तपाइँको खातामा पैसा हस्तान्तरण हुँदैन। हामी सुनिश्चित गर्छौं कि निकासीको लागि प्रयोग भएको बैंकिंग विधिहरू सुरक्षित र छिटो छन्। हामी सुनिश्चित गर्छौं कि अनलाइन क्यासिनोले सूचिकरण गर्दछ कि तपाईंले फिर्ता लिनको लागि कहिले पर्खनु पर्दछ र यदि त्यहाँ शुल्कहरू छन् भने। हामी क्यासिनोबाट टाढा रहन्छौं जहाँ फिर्ती प्रक्रिया लामो र बोझिला छ।
१० स्वीकृत क्यासिनो सूची ✓
यदि अनलाइन क्यासिनोले माथिका सबै बक्सहरूलाई टिक्दछ भने हामी मूल्या we्कन प्रक्रिया पूरा गर्नेछौं। हामी साइटaदिनेछौं अन्तिम अंक र हाम्रो टीम तपाईलाई विस्तृत समीक्षाको साथ प्रस्तुत गर्दछ। अनलाइन क्यासिनोले हाम्रो जुवा साइटहरूको अनुमोदित सूचीलाई बनाउँदछ जुन दक्षिण अफ्रिकी खेलाडीहरूको लागि उपयुक्त छ। तर यो सिफारिश साइटहरु को सूची बाहिर पर जान्छ।
हामी यो सुनिश्चित गर्दछौं कि अनलाइन क्यासिनोले स्तर कायम गर्दछ जुन यसलाई हेर्यो कि यसको मूल्या rating्कन पहिलो स्थान पाउँदछ। प्रत्येक केहि महिनाहरुमा, हामी साइटलाई पुन: भ्रमण गर्नेछौं भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि कि क्यासिनो अझै पनि माथिका सबै मापदण्डहरु पूरा गर्दछ। यदि एक अनलाइन क्यासिनो एक खराब स्कोर को विकास, हामी तपाईं को बारे मा सजग हुन चाहन्छौं। हामी हाम्रो ब्ल्याकलिस्टमा छायावादी, अनौंपारदर्शी वा अनुचित क्यासिनो सूचीबद्ध गर्दछौं ताकि तपाईं उनीहरूलाई बेवास्ता गरेर तपाईंको पैसा बचाउन सक्नुहुनेछ।
शीर्ष १० दक्षिण अफ्रिकी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: 31 सक्छ, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० दक्षिण अफ्रिकी अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० दक्षिण अफ्रिकी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
2 सबैभन्दा खराब र सर्वश्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिकी अनलाईन क्यासिनोहरू छुट्टाउँदै
3 हाम्रो १० चरण मूल्यांकन
शीर्ष १० दक्षिण अफ्रिकी ...